विदेशमा बसेका श्रीमानले फेसबुकको प्रोफाइलमै खुलेआम अर्कै महिलाको फोटो राखेपछि, घरमा रुवाबासी (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > विदेशमा बसेका श्रीमानले फेसबुकको प्रोफाइलमै खुलेआम अर्कै महिलाको फोटो राखेपछि, घरमा रुवाबासी (भिडियो सहित)
admin December 11, 2020 December 11, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाचार	0
थाहा छैन हिजोआज नेपाली समाज कतातिर गईरहेको छ । तर जुनदिशातिर गईरहेको छ त्यही दिशातिर पाल्पाकी मधु र कृष्णको पनि बैबाहीक सम्बन्ध गईरहेको छ । जस्को कारण मधु र उनका श्रीमान कृष्णको दुई सन्तान आमा बुवा जिवितै हुँदाहुँदै पनि टुहुरा जस्तै भएका छन् ।
श्रीमानले खुलेआम राखेको अनैतिक सम्बन्धका कारण आफुलाई तनाब भएको र केही सहयोग हुन्छ कि भन्ने आशामा मिडियामा आफ्ना ब्यथा पोखेको बताउँछिन् मधु । शुरुशुरुमा त मधुले श्रीमानको व्यवहारहरुलाई केही सहंदै त केही नजर अन्दाज गर्दै बसेको बताईन् ।
मधुलाई श्रीमान कृष्णको व्यवहार तब सही नसक्ने भयो जब उनले अरुसंग सम्बन्ध राखेको केटीले नै मधुलाई कृष्ण मेरो श्रीमान हो भन्दै फोनमा नानाथरीका कुरा गरीन् । मधुले एक यूटयुव च्यानलमा रुँदै भनिन्,‘श्रीमानको यत्तिसम्मको व्यवहार त कुन चै श्रीमतीले सहन गर्न सक्ला र ? जुुन मैले सही रहेकी छु । मेरो जीवन बर्बाद हुने भयो ।’ भन्दै उनी भक्कानीदै राईन् ।
दशैं टीका : शीतल निवासभन्दा निर्मल निवासमा सर्वसाधारणको घुइँचो ! (फोटो फिचरसहित)